Myanmar News – Page2– Trusted And Updated In Myanmar
မြန်မာ Idol Winner ဖြစ်ပြီး ၇ လ အတွင်း ဖြိုးမြတ်အောင် နဲ့ သူ့ပရိသတ်များက အလှူငွေပေါင်း 15,752,500 ကျပ်တိတိ လှူဒါန်းပြီး
အလှူငွေပေါင်း 15,752,500 ကျပ်တိတိ Myanmar Idol သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲမှာ ထူးခြားလှတဲ့ အဆိုတော် ၁ ဦးပါ။ အံမခန်းတဲ့ ပရိတ်သတ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး season3winner ဖြစ်ပြီးကတည်းက ပရဟိတဘက်မှာရော ကြော်ငြာရိုက်ကူးခြင်း လုပ်ငန်း ရှိုးပွဲတွေ လိုက်လံဖြေဖျော်မှုများ နဲ့ မနားတမ်း အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဂီတလူငယ်တဦးပါ။ သူ့မှာ ထူးခြားတာက ထောင်လွှားမှု …
နွားဘ၀ဖြင့် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း( ၃၀ )ခန့်က ဖြစ်ရပ်မှန်ပါလူတို့သည် သံသရာကြွေးကို ပေါ့ပေါ့လေးထားပြီး မကြောက်တတ်ကြ မိမိတို့ယူထားသော အကြွေးမှန်သမျှ ကျင်လည်ရသည့် ဘဝအဆက်ဆက် ၌နွားခြေရာနောက်ကို လှည်းဘီးပါသလို တကောက်ကောက် လိုက်ပါသွားသည်ကို မေ့လျော့နေကြ၏။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ခန့်က ကိုသာမောင်သည် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့် အင်းတစ်ခုကိုလေလံဆွဲရန် အတွက် ဘကြီးဘိုးထွန်းထံမှ ငွေနှစ်ထောင်ချေးငှားခဲ့ပါတယ်။ ဘကြီးက အတိုးပင်မယူပဲ ချေးပေးခဲ့ရာ …
နာမည်ကြီး “မှည့်” ရုပ်သံ။ မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်က ကျောင်းသူလေးရဲ့အကမှာမျောသွားတဲ့ အဆိုတော် ဟဲလေး
ဟဲလေး အဆိုတော် ဟဲလေး။ ဒယ်ဒီဟဲလေး ဆိုတာ ပရိတ်သတ်တွေ ရဲ့ ရင်ထဲကို သီချင်းအလန်းစားတွေ ထည့်ပေးတတ်လို့ ဂီတနယ်ပယ်မှာ ထိပ်တန်းက ရပ်တည်နေတဲ့ အဆိုတော် ၁ ယောက် ပါပဲ။ လက်ရှိ နွေဦးပေါက်ရာသီဟာ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က တက္ကသိုလ်တွေ ကျောင်းတွေရဲ့ ကျောင်းသင်္ကြန်ကျင်းပချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ဟဲလေးရဲ့ အခွေထဲက “မှည့်” သီချင်းကို မြစ်ကြီးနား …
အွန်လိုင်းမှာ ပြန့်နှံ့နေသော ဖခင် ဖြစ်သူ ရက်လည်နေ့မှာ သားဖြစ်သူ အသတ်ခံရတဲ့အမှု
ဖအေက ရက်လည် ၁၀-၃-၂၀၁၉ ရက် နေ့က ဖအေက ရက်လည် အဲ့ဒီနေ့မှာပဲ သားက အသတ်ခံရတဲ့ ဖြစ်ရပ် မန္တလေးမြို့မှာ ကြုံခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်လိုက်တာ အရမ်းပါပဲ။ မိသားစုတွေ ပူဆွေးနေတဲ့ အသုဘ ရက်လည်ရက်။ အသုဘစောင့်ရင်း ရက်လည်းအိမ်မှာ ဖဲဝိုင်းလုပ်တာ ထုံးစံပါ။ အဲ့ဒီမှာ ဖဲရိုက်ရင်း နာရေးရှင်က မင်းလား ငါ့ဖုန်းကို ၁ သိန်းနဲ့ …
သာသနာညှိုးနွမ်းစေသည့် သံဃာအတုတွေ ဖမ်းမိ။ ဘယ်လောက်ဝါရင့် သဘာရင့် နေလဲဆိုတာ…
သံဃာအတု သာသနာညှိုးနွမ်းစေသည့် သံဃာအတုများအား ထိန်းသိမ်းဆုံးမ “ ယမန်နေ့က ထိန်းသိမ်းရေး ” ၁၃၈၀-ခု၊ တပေါင်းလ္ဆန်း(၅)ရက်(၁၀-၃-၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ ည(၈)နာရီ (၃၀)မိနစ်ချိန်မှာ မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး လူနာများနှင့် လူနာစောင့်များထံ ပိုက်ဆံ လှည့်လည်အလှူခံနေကြတဲ့ သင်္ကန်းဝတ်ပုဂ္ဂိုလ်(၂)ဦး တွေ့ရှိရလို့ ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း …. ဆေးရုံလုံခြုံရေးပုဂ္ဂိုလ်များက ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ သာသနာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ထံ တိုင်ကြားလျှောက်ထားလာလို့ သာ/ထိန်းအဖွဲ့ ကြွရောက်ကြရပါသည်။ ” ဝါရင့်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နေ ” …
ဖခင်ဖြစ်သူ ရက်လည်နေ့မှာ သားဖြစ်သူ အသတ်ခံရ…
March 11, 2019 March 11, 2019 - by adminpph - LeaveaComment
အသတ်ခံရ… ဖခင်ဖြစ်သူ ရက်လည်နေ့မှာ သားဖြစ်သူ အသတ်ခံရ….. သမ္မတကြီး သိပါစေတော့ မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ဒေါ့နခြံ ရပ်ကွက် ၁၀-၃-၂၀၁၉မှာ ဒီနေ့ ဖအေကရက်လည် ဒီနေ့သားက အသတ်ခံရ ဖြစ်စဉ်မှာ နာရေအိမ်ကို ဖဲရိုက်ရက မင်းကနာရေးရှင်လားဟုမေးပြီး…. ငါ့ဖုန်းကို၁ သိန်းနဲ့အပေါင်ထားမယ်ပြောရာ မောင်နေအောင်က ကျန်တော်တို့မှငွေမရှိပါဘူးခင်ဗျာ ဟုပြောလိုက်ရာ…. မင်းငါ့တို့အကြောင်းသိစေရမယ့်လို့ပြောပြီး လူအရောက် ၂၀ ၀န်းကျင်းက ၀ိုင်းသတ်ရ …
ဘူးသီးရဲ့ အစွမ်း သင်မသိသေးတဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘူးသီးရဲ့ အစွမ်း မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့မီးဖိုချောင် ထဲမှာ အတွေ့ရများတဲ့ ဘူးသီး ဟာ သွေးတိုးကျစေတဲ့ အစွမ်းနဲ့ နှလုံးရောဂါ သက်သာစေတဲ့ အစွမ်းရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဘူးသီးကို ဟင်းခါး အဖြစ် ကျိုချက် သောက်သုံးကြသလို ဘူးသီးကို ပြုတ်ပြီး တို့စားတာ၊ သုပ်စားတာမျိုး လည်း ပြုလုပ်ကြပါ …
တနင်္သာရီ ၀န်ကြီးချုပ် ကိစ္စ နိုင်ငံတော်သမ္မတ အမိန့်ထွက်ပြီ
တနင်္သာရီ ၀န်ကြီးချုပ် Zawgyi သမ္မတအမိန့်ထွက်ပြီ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါ်လဲ့လဲ့မော်ကိုယနေ့မှစ၍တာဝန်မှရပ်စဲလိုက်ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကအမိန့်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ Ko Kyaw Swar Min တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလဲလဲ့မော်အား ကော့သောင်းရဲစခန်းတွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထား ။တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလဲလဲ့မော်ကို မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီခွဲ ခန့်က ကော့သောင်းရဲစခန်းတွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားကြောင်း ခိုင်မာတဲ့သတင်းအရင်းမြစ်မှ စုံစမ်းသိရပါတယ်။ တနင်္သာရီတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အစိုးရအဖွဲ့သည် ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်ပြည်ကြီးမဏ္ဍိုင်မြို့တွင် ဒေသခံများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ ပြုလုပ်ပြီးချိန်မှာ …
အောင်သမာဓိ ကွမ်းယာသည်ရဲ့ သားဖွားခန်း။ ကွမ်းယာသည် ဘ၀မှ အောင်သမာဓိ ပိုင်ရှင်
အောင်သမာဓိ Zawgyi ကျုပ် ကွမ်းရောင်းရင်းနဲ့ကလေး လေးယောက်ရခဲ့ပါတယ် ။ သူတို့ကိုမွေးပုံ ဖွားပုံနဲ့ ကံတွေကလည်းမတူကြ ဘူးလေ။ သူတို့လေးတွေအားလုံး ကျုပ်ရဲ့ မျက်စေ့ရှေ့အောက်မှာဘဲမွေးခဲ့ကြတာပါဘဲ။ (၁၉၈၄)မှာသမီးကြီးမဇင်မွေးတယ် သူ့ကိုကိုဝန်ရှိတော့ အိုဂျီတွဘာတွေအပ်ဘို့နေနေသာသာ ကိုယ်ဝန်ရှိတာတောင်မသိလိုက်ရပါဘူး ထူးတာက ကွမ်းရောင်းရင်းအဆင်းရဲဆုံးအချိန်မှာ .. နောင်မှာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်လာမဲ့ Dr ထွန်းအောင်ကျာ်က အလကားမွေးပေးခဲ့တာပါ မွေးဖွားပုံ အဲ့တုံးက ကျောင်းဆင်းပီးခါစ ဆရာဝန်ပေါက်စလေး Dr …
ဒီကျောင်းသားလေးအတွက် အလှူရှင် ပေါ်ပြီ။ မိဘ ၂ ပါးလုံး မရှိတော့တဲ့နောက် အိမ်မှာ ၁ ယောက်တည်နေထိုင်တဲ့ ကျောင်းသားလေး စာဖြေမယ့်နေ့မှာ အိပ်ပျော်နေ။
အလှူရှင် ပေါ်ပြီ Zawgyi တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း အင်္ဂလိပ်စာဖြေဆိုသည့်နေ့ကစာကျက်လွန်၍ အိမ်တွင်အိပ်ပျော်နေသောကျောင်းသားအား ကျပ်သုံးသိန်းလှူဒါန်း ဒေါပုံမြို့နယ် ယမုံနာ၂ရပ်ကွက် ကမ်းနားလမ်း မ၃၆၃ မှ ကျောင်းသားမောင်သန်းထွေးမှာ တက္ကသိုလ်တန်း ဝင်စာမေးပွဲဖြေဆိုသည်မှာမှန်ကန်ပါသည်။ မိဘ၂ပါးမရှိတော့သည်မှာလည်း မှန်ကန်ပါသဖြင့် ကလေးအား အားပေးစကားများပြောဆိုသည့်အပြင် တာချီလိတ်နေ ဦးဇော်လေး ဒေါ်ရှားရှား မိသားစုတို့မှကျောင်းသားလေး မောင်သန်းထွေး လိုအပ်ရာ သုံးစွဲနိုင်ရန် ငွေကျပ် သုံးသိန်း (၃၀၀၀၀၀)ကျပ် …